Asa 20 - Ny Baiboly
Asa toko 20
Paoly mankany Masedonia, sy Gresa - Ny nananganan'i Paoly an'i Eotika tamin'ny maty tany Troasy - Ny nanaovany veloma tany Mileto ny Pretra avy any Efezy.
1Nony nitsahatra ny tabataba, namory ny mpianatra Paoly, ka nananatra azy, sy nanao veloma azy, dia lasa nankany Masedonia. 2Nitety izany faritany izany izy, namporisika ny olona tamin'ny teny maro, dia lasa nankany Gresa. 3Nitoetra telo volana tao izy, dia niomana hiondrana an-tsambo hankany Siria, kanjo nikendry azy ny Jody, ka nanapa-kevitra izy fa hamaky an'i Masedonia. 4Ary ireto no niaraka taminy hatrany Asia: Sopatera zanak'i Pirosa avy any Berea, Aristarka sy Sekondosa avy any Tesalonika, Gaiosa avy any Derbe, ary Timpote sy Tisika sy Tromfima avy any Asia. 5Dia nialoha izy ireo, ka niandry anay tany Troasy. 6Fa izahay kosa niondrana an-tsambo, niala tao Filipy taorian'ny andron'ny Azima, ka hadimiana vao tonga tany amin'izy ireo tany Troasy; dia nitoetra tao hafitoana izahay.
7Ary tamin'ny andro voalohan'ny herinandro, raha niangona hamaky ny mofo izahay, dia nampianatra azy ireo Paoly, ka nanohy ny toriteniny hatramin'ny misasaka alina, fa nikasa handeha maraina. 8Jiro maro no tao amin'ny efitra ambony niangonanay. 9Nisy kosa tovolahy anankiray izay atao hoe Eotika, nipetraka teo am-baravarankely; sondrian-tory mafy izy io, fa naharitra ela ny toritenin'i Paoly, ka nirona izy, dia nidaboka tany ambany avy amin'ny rihana fahatelo; nony narenina izy, dia indro fa efa maty. 10Nidina namonjy azy Paoly, dia niondrika teo amboniny, sy nanohona azy, ary nanao hoe: Aza manana ahiahy hianareo, fa mbola misy aina ihany izy. 11Dia niakatra indray Paoly, namaky ny mofo sy nihinana, ary niresaka ambara-pahamarain'ny andro, vao lasa nandeha. 12Ilay tovolahy tamin'izay dia efa velona ka nentin'izy ireo nody tamin-kafaliana lehibe.
13Izahay kosa dia niondrana an-tsambo, nialoha nankany Asosa, fa eo no handraisanay an'i Paoly araka ny teny nomeny, satria nandeha an-tanety izy. 14Nony tafahoana taminay tany Asosa izy, dia noraisinay, ka lasa nankany Mitilena izahay. 15Niondrana an-tsambo avy eo izahay, dia tonga tandrifin'i Kiao ny ampitso, ary nitody tao Samosy ny ampitson'izay, vao tonga tany Mileto ny ampitson'iny indray. 16Ny handalo fotsiny fa tsy hijanona ao Efezy no efa nokendren'i Paoly mba tsy hitoerany ela any Asia: satria maika hamonjy ny andron'ny Pentekoty any Jerosalema izy raha zao atao.
17Raha mbola tany Mileto izy, dia naniraka hankany Efezy, nampaka an'ireo Pretran'ny Fiangonana. 18Ka nony tafavory teo aminy izy ireo, dia hoy izy taminy: Fantatrareo hatramin'ny andro voalohany nahatongavako teto Asia izay toetry ny fitondran-tenako taminareo hatrany hatrany; 19fa nanompo ny Tompo tamim-panetren-tena lehibe sy tamin-dranomaso aho, ary tamim-piaretana ny fahoriana noho ny nikendren'ny Jody ahy. 20Tsy nisy nafeniko izay nahasoa anareo, fa notoriko taminareo sy nampianariko anareo am-pahibemaso sy isan-trano. 21Nambarako tamin'ny Jody sy tamin'ny jentily ny fanatonana an'Andriamanitra amin'ny fibebahana sy ny finoana an'i Jesoa Tompontsika. 22Ary ankehitriny indro teren'ny Fanahy hankany Jerosalema aho; nefa tsy fantatra izay hanjo ahy any. 23Izao ihany no ambaran'ny Fanahy Masina amiko isan-tanàna isan-tanàna alehako, dia misy famatorana sy fanenjehana miandry ahy. 24Tsy misy atahorako anefa izany zavatra izany; ary tsy ataoko ho zavatra ny aiko rahefa tanteraka ny diako, ka vitako ny raharaha noraisiko tamin'i Jesoa Tompo, dia ny mitory ny Evanjelin'ny fahasoavan'Andriamanitra.
25Eny iký, ry olona nalehako nitoriako ny fanjakan'Andriamanitra! fantatro fa tsy hahita ny tarehiko intsony hianareo rehetra. 26Koa izany no ilazako aminareo anio fa afa-tsiny amin'ny ranareo rehetra aho, 27satria efa nambarako avokoa fa tsy nisy nafeniko taminareo ny sitra-pon'Andriamanitra rehetra. 28Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra, nanendren'ny Fanahy Masina anareo ho mpitandrina mba hifehezanareo Eglizin'ny Tompo izay novidiny tamin'ny rany. 29Fantatro fa rahefa lasa aho, dia hisy amboadia masiaka hiditra eo aminareo, izay tsy hitsitsy ny ondry. 30Ary ny sasany avy aminareo aza dia hitsangana hampianatra hevi-diso, ka hitaona ny mpianatra hanaraka azy. 31Koa miambena re, ary tsarovy lahy fa telo taona maninjitra anie aho no tsy nitsahatra andro aman'alina nananatra anareo tsirairay avy tamin-dranomaso!